Iraisam-pirenena Dating site - ny
Eto aho no nihaona ny antsasany. Misaotra noho ny fahasambarana lehibe izay ananantsika ankehitriny. Dia nisy lehilahy naniry ny fiainany manontolo, ary milaza izy fa mahatsapa izany ihany koa. Manana ny fahatsapana fa fantatsika samy hafa nandritra ny fotoana ela, ary ny isan’andro ny fiainana izao ary feno fifaliana. Amim-pahatsorana, i Nadia misaotra anao fa ianao ary inona no ataonareo toy izany mahafinaritra ny asa, hanampy ny olona mba hahita ny tsirairay amin’ny lehibe ity izao tontolo izao.
Ny zavatra hafa rehetra any ny ny tanan i Nadia (Brezila) teo Aloha, raha nisy olona nilaza tamiko fa mba hahita ny fitiavana ao amin’ny Internet dia marina ary tsy maintsy fotsiny nihomehy. Fa ankehitriny fantatro fa hitranga ny fahagagana satria nahita sipa, ry Simona, miaraka amin’ny fanampiana ny namany sary. Nihaona tamin’ny olona, ary nahatsapa izahay fa izahay dia nahafantatra ny tsirairay ny fiainany manontolo. Isika rehetra dia mila ny mahita ny hafa, ary isika nanao izany. Ankehitriny dia efa samy voafafa ny mombamomba azy ao mariky ny fanajana ny tsirairay. Misaotra anao mampiseho antsika ny fomba samy hafa. Maniry aho ny hafa rehetra lehilahy sy vehivavy, mahita ny fitiavany eto.
Hello. Izaho dia te Haneho ny tena manokana noho ny olona rehetra izay namorona ity mahafinaritra toerana. Mieritreritra aho fa ny safidy, ary ankehitriny, ry vadiko, mba miaraha amiko. Nihaona izahay eto, nanomboka niresaka. Nampiasa isan-karazany ankehitriny ny fifandraisana. Ary farany, taorian’ny taona maro ny fifanakalozan-kevitra sy ny fivoriana, nivady izahay tamin’ny novambra, ary tena faly aho. Sarotra ho ahy ny mahatakatra sy mino fa iraisam-pirenena ny Aterineto Mampiaraka tena miasa. Na iza na iza izay mitady ny fitiavana, manoro hevitra aho tsy nisalasala mba hisoratra anarana. Efa nanoro hevitra ny namako rehetra mba hanao izany. Amin’ny tsara indrindra faniriana, Irina
← Filipiana amin'ny chat dia tafiditra ao amin'ny Filipiana amin'ny chat ao amin'ny Filipiana Cupid
ZANAKO SIPA NITSIDIKA AHY AO FILIPINA. (Filipina sy Kanadianina lasa ny Filipiana) →